Uma singayeki ukufudumala kwembulunga yonke kuzoba nokufa kwabantu ngaphambi kwesikhathi okuyizinkulungwane ezingama-60 ngonyaka ka-2030 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukufudumala kwembulunga yonke kuyisongo esikhulu esibhekene naso. Uma singayibheki ngokuthatha izinyathelo eziphumelelayo zokuyimisa, ngo-2030 kungaba nokufa kwabantu abayizinkulungwane ezingama-60 ngaphambi kwesikhathi, kuthi ngo-2100 kube cishe izinkulungwane ezingama-260, ngokusho kocwaningo olushicilelwe ephephandabeni i-'Nature Climate Change '.
Futhi, ngenxa yokuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta ukugxila kokungcola okusemkhathini, impilo yomuntu ingase ibe buthakathaka kuze kube seqophelweni lokuthi impilo yabo isongelwe.
Amazinga okushisa aphezulu ukusheshisa ukusabela kwamakhemikhali okudala ukungcola komoya, njenge-ozone nezinhlayiya ezinhle, ezithinta inani labantu. Ngaphezu kwalokho, izindawo ezinemvula encane nazo zingangcola kakhulu, ngoba umoya ushintsha kancane ngenxa yokuntuleka kwemvula futhi, ngenxa yokwanda kwemililo.
Ukufinyelela kuleso siphetho, abacwaningi basebenzise uchungechunge lwamamodeli wesimo sezulu womhlaba wonke ukuthola inani lokufa ngaphambi kwesikhathi okuzokwenzeka ngenxa ye-ozone kanye nezinhlayiya ngonyaka ka-2030 no-2100. Babe sebesebenzisa imiphumela endaweni yabantu bomhlaba. kucatshangelwa ukukhula komphakathi kanye nezinguquko ezihambisana nokungcola komoya okulindelekile.
Noma kunjalo, bakwazile ukuthola ukuthi ngenxa yokushisa komhlaba, inani labantu abafa ngaphambi kwesikhathi elihlobene nokungcola lizokhuphuka emhlabeni wonke, ngaphandle kwase-Afrika. Eqinisweni, amamodeli amahlanu kwayisishiyagalombili abawasebenzisile abikezela ukuthi kuzoba nokufa ngaphambi kwesikhathi ngo-2030, namamodeli ayisikhombisa amasha ngo-2100.
Uma sikugcina lokhu engqondweni, sizobona ukuthi kubaluleke kangakanani manje ukuthatha isinyathelo ngokulwa nokushisa komhlaba, ngoba ukuphela kwendlela yokugwema ukufa kwabantu abaningi kangaka. Ngokwengeziwe, impilo ingathinteka yiziphepho ezinkulu, ukusabalala kwezifo, kanye nezinguquko ekucindezelekeni kokushisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Uma singayeki ukufudumala kwembulunga yonke, kuzoba nokufa kwabantu ngaphambi kwesikhathi okuyizinkulungwane ezingama-60 ngonyaka ka-2030